Sina Shina Sexy Leoparda pirinty vita pirinty ho an'ny vehivavy tsy misy fehikibo tsy misy haingam-pandeha tsy hita soritra ary fehin-fohy fohy dia manangona ny orinasa mpanamboatra marika matevina sy mpamatsy | Yiyun
Kitapo arosana (kitapo iray ho an'ny pataloha tsirairay)
Fitaovana fametahana hoditra sy fitaovana azo antokaManakarama
Manohana santionany izahay, santionany ny saram-pandoavana azo averina averina aorian'ny fandaharana
Tongasoa eto amin'ny fifandraisana aminay mba hahazoana vidiny
Famolavolana natao manokana
2-5 andro fiasana rehefa vita ny fandoavana
PayPal, firaisankina tandrefana, grama vola, T / T
Express (DHL / Fedex / UPS), Airfreight, ranomasina fitaterana
Amerika Avaratra, Eropa, Mid Atsinanana, Amerika Atsimo, Azia, Afrika, Aostralia sns
1. 100% antoka omena fahafaham-po.
2. Ny loko rehetra, ny habe, ny famolavolana dia azo atao isaky ny takinao na santionany.
3. Manome endrika endrika fonosana OEM maimaim-poana sy fonosana boaty maimaimpoana ho fampiroboroboana anao.
4. Afaka mahazo valiny ao anatin'ny 24 ora ianao.
Vehivavy tsy miolakolaka tsy misy kitoatoa miaraka amin'ny fehin-kibo raha ampitahaina amin'ny fehin-kibo nentim-paharazana, dia mety tsara kokoa ny mamorona vata V voajanahary sy mahatalanjona. Sexy amin'ny fanaovana akanjo na akanjo.
Ity fehikibo miendrika boribory ity sy ny fonon-drongony silicone dia malemy fanahy amin'ny hoditrao ary mitazona ny tratrany ary malaza amin'ny akanjo tsy misy tohiny.
Kohuijoo manosika bras miraikitra ho an'ny vehivavy dia afaka milalao amin'ireo akanjo ivelany, akanjo tsy miorina amin'ny tampony ary tampony. Io no safidin'ny andriamanibavy, branioma manokana ho anao.
1.Asoraho ny tratranao ary avelao ho maina ny tratranao, tsara indrindra ny mijoro eo anoloan'ny fitaratra.
2. Ahena ny fehin-kibo, avereno ny zorony ary fehezo amin'ny sisiny.
3. Hetony moramora ny fihodinan'ny bra mandra-pahatongan'ny endrika tonga lafatra.
4. Hamafiso ny hidim-baravarana ary fehezo amin'ny tady.
1.Aoka hisasa amin'ny masinina fanasana, diovy amin'ny rano mafana sy savony.
2.Sweat dia misy fiantraikany amin'ny fahatapahana, noho izany dia tsy mety amin'ny fampiasana amin'ny hafanana any ivelany na manao fanatanjahan-tena.
Amboara A: 70A (32A) 70B (32B) 75A (34A) 80A (36A)
Amboara B: 34B (75B) 36A (80A) 32C (70C) 30D (65D)
Fiadiana C: 34C (75C) 36B (75B) 32D (70D) 30DD (65DD) 38A (85A)
Famolavolana hoditra: Ny fehikibo mifikitra amin'ny hoditra dia vita amin'ny fitaovana salama sy voajanahary. Ny fantsom-bolo hentitra dia manampy hanosika ny tratranao sy hitazona ny tratranao amin'ny toerana tsara mba hisorohana ny sakam-bava. Mila misintona kely fotsiny dia omena anao feno arySexy fisarahambazana.
Fitaovana malefaka sy azo antoka: ity bra tsy backless hita maso ity dia vita amin'ny akora voajanahary malefaka, salama sy salama, tsy misy kofehy tsy mihetsika tsy manam-pahaizana mihetsika tsy misy pentina. Aorian'ny fampiasana dia mila mampiasa rano soapy tsy miandany fotsiny mba hanadiovana, ary ho maina ny rivotra. Rehefa maina, ny malemy dia mamelona indray ny tenany.
ManakaramaFamolavolana: io bra io tsy misy miolakolaka tsy misy fotony io dia miteraka endrika fahatongavan-doha. Makà famafazana fanampiny tsy misy tadim-bolo ary ataovy veloma amin'ny fotoana mahamenatra rehetra. fotoana.
Fitaovana - Nylon Fabric + Silicone fametahana.
Endri-javatra - pirinty leopro, maizina gel silicone brhesive br miaraka amin'ny kaopy lamba, tsy misy lamosina, tsy ahitam-bokatra, tsy hita maso.
Mahazo aina ny manafintohina ary tsy mamela trace amin'ny hoditrao aorian'ny fanesorana ny bra
Mora ampiasaina, mora diovina - diovina, azo averina imbetsaka amin'ny fampiasana tsara sy fikarakarana mety.
Fotoana: tonga lafatra amin'ny akanjo tsy mihetsika, halter / strapless amin'ny hariva, akanjo ambany sy akanjo fitafy. Tsara ho an'ny fety, mariazy, dihy, fisakafoanana, fialantsasatra na fety fanao amin'ny fomba tsy ofisialy na tsia.
OEM / ODM, Ny famolavolana vita amin'ny Customized dia raisina.
Previous: Silicone Strapless fametaka bra tsy azo ampiharina mifono vy mampivadi-po tsy mihetsika tsy hita mihetsika ho an'ny vehivavy voninkazo endrika
Manaraka: Ny vehivavy mahery vaika mahery be
Tsy hita maso Bras
Varotra vaovao amidy maoderina mafana Exclusive ho an'ny Hall ...
Vehivavy vaovao Silicone manosika ny akanjo anaty vehivavy Invi ...
FASHION hatsikana tsara tarehy seamless bra Backless ...
Fivarotana mivantana am-perinasa an'ny vehivavy Sexy Seamless Bra Bac ...
Silicone Push Up vehivavy mitafy akanjo tsy hita maso ...